Kwegajethi lanamuhla kufanele kuhlanganiswe ngokuvumelanayo isimo nokubukeka futhi eliphezulu izingxenye yangaphakathi ezinikeza Ukucaciswa devaysu okusezingeni eliphezulu. Namuhla, ngisho isabelomali smartphone ezinhle ihlangabezana nalezi zimfuneko. Lapho ekhetha kudivayisi ephathekayo kufaka phakathi amagajethi isigaba esithile intengo indima ebaluleke kakhulu udlalwa ukubukeka ifoni, kanye nokuzinikela ukukhiqizwa kwanoma yiphi inkampani. Thenga i-smartphone engabizi noma umkhiqizo engaziwa waphinda ukusekela nomkhiqizi wakho ozithandayo? Iyiphi idivayisi kungcono - omunye ukukhiqiza kuthelevishini lokuqala amafoni giant Letv noma ngomunye futhi umsebenzi wobuciko eyaziwa ikhompyutha tycoon Asus?
1s Letv: smartphone ezinhle engabizi izici ephezulu ekupheleni
Novelty 2015 - Letv 1s 4G phablet zaba okulindelwe labo kusukela ngesikhathi isimemezelo lokuqala kulandela izindaba mayelana nale divayisi. Ukubukeka isimo ibonisa smartphone yayo futhi ivumela umnikazi hhayi ulahleke ngemuva wabanikazi imikhiqizo apula. Njengoba le gajethi okungukuthi lutho ngobuchwepheshe ngingelutho futhi ngokuvamile ukwedlula ngisho yabo yilabo abaphikisana nazo.
Eliphezulu isikrini Full HD-isixazululo kanye kakhulu efanele namuhla diagonal 5.5 amasentimitha ithatha cishe yonke aphambi komtshina. Ohlangothini emuva, ngaphezu 13-megapixel (!) Ikhamera nge-flash, uthumele umfundi zeminwe elikuvumela ukuba uvule kalula idivayisi ngesandla esisodwa, futhi imishini nge idayagonali enjalo ikhambi enengqondo kunazo ne-lula ekususeni block. Kufanele kuqashelwe ukuthi okwabangela okungenani 9 kweziyi-10 kuthintwa, futhi lokhu kuyinto yi ezinhle yesimanje ifoni scanner. Futhi konke lokhu endaweni ehlonishwayo metal icala!
Kodwa yini ephakathi? Yini enye ukujabulisa lesi sabelomali smartphone ezinhle? It ibekwe sephizela MediaTekHelio X10 processor eno cores eziyisishiyagalombili, imvamisa iwashi ngayinye okuyinto ilingana 2.2 GHz, futhi 3 gigabytes yimemori. Lezi zimo zokuma zikuvumela ukugijima imidlalo olindele kunazo futhi izicelo kwi "Ultra" bengabheki ukuthi yini smart Ifoni ayikwazi ukuphatha. Uhlelo lokusebenza olufakwe kusukela ebhokisini, --Android 5.0Lollipop, kodwa ngokushesha ngosizo-Wi-Fi, ungakwazi uthuthukele 5.1, futhi ngokushesha, lapho kukhululwa inguqulo entsha, futhi kufika ukuguqulwa lesithupha. Igajethi waqaphela ukuthi kungenzeka ukushaja okusheshayo: amahora 3.5 emizuzwini engu-5! Lena akuyona nje isabelomali smartphone ezinhle - jet indiza umdlalo ngamaRandi 211 kuphela!
ASUS ZenFone 2 Laser: i ikhamera amazing kanye laser autofocus
Uma umsebenzi akuyona ukuthenga smartphone engabizi futhi uthole omunye umholi wabaholi emhlabeni yezinto zobuchwepheshe, kufanele sinake kudivayisi ASUS ZenFone 2 Laser, intengo zazo esitolo Gearbest - $ 345, ongazange ukubiza isabelomali salo.
Izici zivumelana ukubaluleka: a-eziyisithupha intshi-HD isikrini esigcwele, ayisishiyagalombili-phezulu processor, gigabytes ezimbili RAM ... Kodwa kukhona lokhu smartphone, omunye gqamisa okwenza kube ukugqama mncintiswano - 13-megapixel ikhamera laser autofocus, okuvumela ukuba wenze izithombe smart futhi shoot (!) amavidiyo eliphezulu. Ngakho labo abafisa ukuba ukuzoqhubekisela zikhathi engcono kakhulu yokuphila kwakhe, lo smartphone ibekwe esigabeni musthave.
Xiaomi redmi Note 3: Ukuqhubeka nganekwane
Bonke labo okungenani ingxenye ujwayelene emhlabeni yezinto zobuchwepheshe, kwaba sobala ukuthi liyincwadi edayiswa kakhulu kunazo in 2015 emalini isukela kuze ku $ 200 - Xiaomi redmi Note 2 - ngokushesha noma kamuva sizothola owalandela wezomthetho, kodwa akekho kulindeleke khona ukuba kwenzeke ngokushesha kangaka: ngokuvamile amafoni smart umugqa owodwa etholakalayo kanye ngonyaka, futhi Note3 waqhubeka ukudayiswa ngo-December. Abaningi walibiza inguqulo ethuthukisiwe ye-imodeli odlule: nakuba nibonakala Isobho ngempela kakhulu ezahlukene, ngobuchwepheshe miningi kunesihlabathi eduze.
Smartphone design ngokuya isimo nokuqashelwa ivelele: esikhundleni igajethi plastic wathola icala enhle metal elibukeka hhayi kuphela ezibizayo, kodwa futhi uqhuba ukushisa kangcono, okuvumela processor ukwehlisa yokuthamela. yonke imibala emithathu ayatholakala:
grey, igolide nesiliva. Idivayisi eseke izinga zeminwe Enani on iphaneli emuva. Red touch-sensitive izinkinobho ohlangothini front lashintsha laba mhlophe nge kwasemuva. Isikrini kwasala kufana nalokho imodeli odlule --5.5 intshi idayagonali, le IPS-matrix, FullHD-resolution - inketho eyanele kakhulu futhi nice looking.
Smartphone ine processor enamandla eziyisishiyagalombili. Kepha RAM, kungaba amelwe ezahlukeneyo ezimbili: 2 no-3 GB. Ngo onobuhle 2GB kungekho 4G ukwesekwa. Kodwa zibiza u- $ 30 ngaphansi. Ngokwesibonelo, ifoni nge grey umzimba angathengwa 179 noma 209 zamadola kuye kulezi zici. Nokho, uma uma uthenga i-smartphone kule umbala ukusebenzisa isigqebhezana (ikhodi 32GBNOTE3-01), ngentengo yalo udedela ukuze $ 199. Futhi uma sithatha ku-akhawunti ukuthi imodeli ezibizayo nge-32 GB imemori yangaphakathi, futhi ashibhile - 16 kuphela (ngokungabi bikho ikhono lokusebenzisa khadi), ukukhetha isobala, futhi lokhu Isaphulelo limnandi kakhulu. Ukuze wenze izinto ethengekayo Note 3 "igolide", udinga ukwengeza ukuba inqola emva ufaka ikhodi 32GBNOTE3-02. Yiqiniso, labo abakhetha namagajethi e ithoni ukukhanya kakhulu ngeke bancishwa smartphone esiliva angathengwa $ 199 ngokufaka ikhodi isigqebhezana 32GBNOTE3-03.
Ukukhethwa umbala - iyindaba ukunambitheka, kodwa ukuthenga ngayo kule divayisi, kunoma iyiphi leze nezindlu - ngaphezu umqondo ezinengqondo. Amagajethi ezinezici ezifana kakhulu eqolo ngaphezu kwanoma le Note 3, ngisho ngaphandle izaphulelo kanye kwephromoshini! Singathini mayelana kungenzeka ukwenza ukuthenga ezinjalo, sibekwa $ 200, kulapho izinga imikhiqizo ephuma Xiaomi bekulokhu phezulu.
P8000 Yocingo: i Uhlolojikelele, izincazelo kanye nokubuyekezwa